Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii degmada Hodan ee magaalada Muqdisho | Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii degmada Hodan ee magaalada Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii degmada Hodan ee magaalada Muqdisho
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya ayaa kala dhex-galay ciidamo hab beeleed u abaabulan oo maanta ku dagaalamay xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan ee Gobolka Banaadir.
Dagaalka ayaa saacado qaatay, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, waxa uuna u dhexeeyay Ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya balse u hubaysnaa qaab beeleed.
Dagaalka ayaa waxaa uu salka ku haayey isku qabsiga dhula sharci darro ah oo ku yaalla xaafadaas, waxaana la sheegay inay ku geeriyoodeen 5 Ruux oo uu ku jirey ruux ku shaqeysanayey Gaari Gacan.
Dadka deegaanka ayaa kusoo waramaya in Ciidamo la kala dhex dhigay, isla markaasina uu joogsaday dagaalkaasi.
Dagaalka inta uu socday ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay isku socodka Ganacsiga iyo Gaadiidka, basle haatan las oo sheegayo in xaaladu ay tahay mid degan, isla markaana Goobaha Ganacsiga dib loo furey.
Maleeshiyaadkaan oo sidoo kale shalay ku dagaalamay halkaasi, wuxuuna dagaalkooda noqday mid soo laalaabto.